PRADEEP BASHYAL: ठमेल, झरी र च्याट
ठमेल, झरी र च्याट
'ओ ! मार्इ गड', उसले हठात् यसरी भन्यो कि त्यहाँ केही ठूलै घटना घट्‍यो । मैले मोवाइलबाट आँखा हटाएँ । तर के नै हुन्थ्यो र ! त्यहीँको एउटा पसल बाहिर कसैलार्इ कुरेझैँ एउटी विदेशी केटी उभिएकी थिर्इ । उसैलार्इ हेरेरे केटो दंग परेछ :) । एक सुरमा हिँडिरहेको उ टक्क अडियो, आँखा झिमिक्क समेत नपारी हेर्यो, मुख निकै खोल्दै फेरी एकपटक 'वाह्' भन्दै थप्यो, 'क्या सेक्सी यार' । भन्यो, 'यो झरीमा त्यो नि भिज्न आर्इ भने त क्या 'बुलेट' देखिन्थी होली ।' हुन पनि मोरी राम्रै थिर्इ, त्यसैले उसको कुरालार्इ मैले पूर्ण सर्मथन जनाए । 'हेर्इ, ह्‍वेर यु लस्ट', एउटी अघिदेखि च्याटरुममा चिच्याउँदै बसेकी रै’छ । विवेकले देखाएको केटी हेर्दैगर्दा हाम्रो लामो च्याट अनायसै रोकिन पुगेको मैले पत्तो नै पाएनछु । त्यसदिन विहान मात्रै मैले जिमेलमा उसको च्याट 'निमन्त्रणा' स्विकारेको थिएँ । र, पछिल्लो आधा घण्टादेखि एकोहोरो कुराकानी गरिराखेका थियौं हामीहरु । रफ्‍तारमा अघि बढिरहेको कुराकानीबाट अचानक म हराउँदा ऊ चिच्याएर खोज्दै थिर्इ । सायद 'याहु' म्यासेन्जरमा हाम्रो कुराकानी हुन्थ्यो त त्यसबेलासम्म उसले कयौंपटक घरको ढोका ढक्‍ढकाएझैँ 'बज्' हान्थी होली । धन्न जिमेल च्याटमा त्यो सुविधा छैन र मैले उसको 'बज’‍ सुन्नु परेन ।
'स्टाटस त बबाल छ नि', उसले मलार्इ उक्सार्इ । त्यतिखेर मैले भर्खर नयाँ जिमेल स्टाटस फेरेको थिए, 'काइदाको ठमेल' । हुन पनि ठमेलको माहोलले ममा (सायद मजस्तै धेरैमा) रोमाञ्चकता थपिरहेको थियो । 'माहोल नै यस्तै छ त', मैले सोझो उत्तर फर्काएँ । 'छेउछाउमा कोही छन् र', यति लेखेर उसले 'हिहिहि' थपी । 'अलि बिस्तारै हाँस', भने, 'मेरो छेउमा बस्नेलार्इ डिस्टर्ब होला :) ।' च्याटरुममा आजकल केटीहरु निकै खुलेर गफ गर्छन । अझ केटाहरुसँग जिस्कन पाए त केही चाहीँदैन । मैले विवेकलार्इ बेलाबेलामा यसैगरी च्याटको पछिल्लो अपडेट दिन्छु । 'हो त । आजकल केटीहरु केटाभन्दा बढ्‍ता वाइल्ड हुन थालिसके', विवेकले मलार्इ फर्काएको जवाफमा म अझ प्रस्टिन चाहन्थेँ । उसलार्इ सोधें 'मेरो साथीले भनेको ठिकै हो है?' उसँग आमने-सामने भएरै यो प्रश्न सोधेको भए अझ प्रस्ट उत्तर आउँथ्यो होला, सायद । यस्ता प्रश्नहरुमा आधाजसो जवाफहरु उनीहरुको अनुहारको भावले दिन्छ । तर धन्न ऊ रिसाइन । अगाडि 'हिहिहि' जोडेर झट्ट भनि, 'केटाहरु मात्रै वाइल्ड हुनुपर्छ भन्ने छ र ?' तर उसले विवेकको कुरालार्इ 'हो' पनि भन्न सकिन । काठमाण्डुकै त्रिचन्द्र कलेजमा बिएस्सी गर्ने उसको यसमा आफ्‍नै तर्क छ । भनि, 'जहाँसम्म मलार्इ लाग्छ केटीहरु अलिक खुलस्त र स्वतन्त्र हुन थालेको सामाजिक सञ्जालहरुले गर्दा हो ।' उ आफैँ त्यसको उदहारण भएको बताउँछे, 'एकैछिन ढिलो गर्‍यो कि अझै पनि केटीहरुलार्इ घरपरिवारले नानाथरी शंका गर्न थाल्छन्‍ ।' मैले उजस्ती शहरमा हुर्केबढेकीहरुमा त त्यस्तो समस्या नहोला नि त भनेर जान्न चाहेँ । 'चाहे त्यो जतिसुकै आधुनिक र शहरिया परिवार नै किन नहोस केटा-केटीमा समान धारणा बनाउन अझै सक्दैनन्, थपि, 'त्यसैले तिम्ले भनेझैँ केटीहरु वाइल्ड हुने भनेको प्राय: भचर्अल वल्र्डमै हो ।' 'केटीहरु केटा भएको सुहाउँदैन नि त', मैले भनेर नसक्दै उसले लेखि, 'ह्‍वाट एक्च्युली यु मिन?' मैले आजकल केटाहरुझैँ केटीहरुमा हुने 'ग्याङ्ग फाइट' को प्रशंग जोडे“ । झै-झगडा (ग्याङ्ग फाइट) गर्नु न त केटाहरुको काम हो न त केटीहरुको नै', ऊ भन्छे, 'ग्लोबलाइजेसनको प्रभाव हामीमा उल्टो ढंगले परिरहेको छ ।' उसका अनुसार हामीले सधैँ पश्चिमाहरुबाट नराम्रा कुरा मात्र सिक्यौं । 'डेटिङ्ग जानु, छोटा लुगा लगाउनु, ग्याङ्ग फाइट गर्नु, लागुऔषध लिनु मात्रै हो त हामीले उनीहरुबाट सिकेको !', भन्छे, 'केटीहरु केटासँग खुलेर बोलचाल गरेको, स्वतन्त्र (छाडा होइन) भएर हिँडडुल गरेको सिक्न किन सकेन ?'
You can also catch this article at Aakar Post